တစ်ခါသုံးတစ်သျှူးမျက်နှာဖုံးပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - တရုတ်တစ်ခါသုံးမျက်နှာမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သူများ
SARS လား၊ ဒါမှမဟုတ် coronavirus pneumonia အသစ်လား၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အစားသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့နှံ့မှုတိုင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အဝတ်အစားများ၏အရည်အသွေးသည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အစားများကိုအောက်ပါအချက် (၄) ခုမှပြည့်စုံစွာရှင်းပြပါမည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အဝတ်အစားအတွက်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များဘုံအရည်အသွေးစံနှုန်းများမှာအဘယ်နည်း။ စမ်းသပ်မှုတွေကဘာတွေလဲ။ အကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ ...
2 Ply မျက်နှာဖုံး
အသုံးပြုခြင်း ၁။ လျှောက်လွှာ။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ အထည်အလိပ်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များစသည်တို့။ ၃။ သဲလွန်စအော်ဂဲနစ်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အနံ့များကိုကာကွယ်ခြင်း ၄။ ကြိတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ sawing နှင့် bagging များပြုလုပ်ရာတွင်အမှုန်များကာကွယ်ခြင်း၊ သတ္တုရိုင်း၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သံရိုင်း၊ ဂျုံမှုန့်၊ သတ္တု၊ သစ်သား၊ လေမှုတ်စက်မှထုတ်လုပ်သောအရည်သို့မဟုတ်အဆီဓာတ်မဟုတ်သောအမှုန်များ ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အဝတ်အစား၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဘုံအမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသည့်အဝတ်အစားသည် ဦး ထုပ်များ၊ ထိပ်များနှင့်ဘောင်းဘီများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အဝတ်အစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ အထီးကျန်ဝတ်ရုံနှင့်အကာအကွယ်အဝတ်အစား။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်နှင့်အထီးကျန်ဂါဝန်တို့အကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်သည်အထည်ချုပ်ခြင်းထက်ပိုတာရှည်သည်၊ အကာအကွယ်တန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ ကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်၊
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အဝတ်အစားများထုတ်လုပ်ခြင်း။ အများအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အစားများသည် ဦး ထုပ်၊ ထိပ်နှင့်ဘောင်းဘီများဖြစ်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ တင်းကျပ်ခြင်း၊ ကော်တိပ်ခြင်းနှင့်အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အဝတ်အစားများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်ပါဝင်သည့်စက်သည်အဓိကအားဖြင့်အပ်ချုပ်စက်နှင့်ကော်နှိပ်စက်ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အဝတ်အထည်များအတွက်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များရောဂါကူးစက်ခံထားရသောကျန်းမာရေးလုပ်သားများစွာကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက် ...
3 Ply Disposable မျက်နှာမျက်နှာဖုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်: 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ စတိုင်၊ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၆ ။ ၇ ။ ၈။ "Quick Response" နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု။ အသုံးပြုခြင်း ၁။ လျှောက်လွှာ။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ အထည်အလိပ်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၂ ။
ခဲအချိန်: အရေအတွက် (အပိုင်းပိုင်း) 1 - 1000> 1000 Est ။ အချိန် (နေ့များ) ၃။ ညှိနှိုင်းရမည့်အင်္ဂါရပ်များ - ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း - ၁။ နမူနာများအတွက် FedEx / DHL / UPS / TNT၊ တစ်အိမ်မှတံခါး ၂။ FCL အတွက်လေယာဉ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပင်လယ်ပြင်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လေဆိပ် / ဆိပ်ကမ်းကိုလက်ခံရရှိခြင်း ၃။ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သူများသို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းနိုင်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောဖောက်သည်များ ၄။ ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန် - နမူနာအတွက် ၃-၇ ရက်၊ သုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် 5-25 ရက်။ ၅။ နမူနာပေးပို့ချိန် - DHL / UPS / TNT / FEDEX express မှ ၃-၅ ရက်ကြာ ၆ ။
ခဲအချိန်: အရေအတွက် (အပိုင်းပိုင်း) 1 - 1000> 1000 Est ။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ - ထူးခြားချက်များ - ငွေပေးချေမှုကာလ - သင် T / T၊ Ali Trade Assurance, Western Union မှတစ်ဆင့်အမှာစာအတွက်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ၁: ၁-၃ ရက်ပတ်လုံးနမူနာ ၂ - အမှာစာထုတ်လုပ်မှု။ အချိန် ၅-၁၅ ရက်၊ အရေအတွက်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပေါ်မူတည်သည်။ Q1: သင်၏စက်ရုံသို့သွားရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် Fujian ပြည်နယ် Quanzhou တွင်တည်ရှိသည်။ ကြိုဆိုပါတယ် အားလုံး t ကိုကျော်ကနေအများအပြားဖောက်သည် ...
အသေးစိတ်များ： ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဖယ်ရှားနိုင်သောမျက်နှာမျက်နှာဖုံးဇာစ်မြစ်နေရာ - ဖူကျန့်၊ တရုတ်စာရွက်စာတမ်းခွဲခြားခြင်း - အဆင့် ၁ ပစ္စည်း - စက္ကူစထည်မဟုတ်၊ စက္ကူအရောင်: အပြာရောင် / အစိမ်း၊ အဖြူ / အနက်အရွယ်အစား - ၁၇.၅ * ၉.၅ စင်တီမီတာ BFE - အထက် ၉၉% အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - တစ်နေ့လျှင်အိတ် / အိတ် ၁၀၀၀၀၀ စီအီးထုပ်ပိုးမှုမူလရင်းမြစ် - တရုတ် MOQ: ၁၀၀၀၀၀ အပိုင်းအစလျှောက်လွှာ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှု
အသေးစိတ်များ： ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဖယ်ရှားနိုင်သောမျက်နှာမျက်နှာဖုံးဇာစ်မြစ်နေရာ - ဖူကျန့်၊ တရုတ်စာရွက်စာတမ်းခွဲခြားခြင်း - အဆင့် ၁ ပစ္စည်း - စက္ကူစထည်မဟုတ်၊ စက္ကူအရောင်: အပြာရောင် / အစိမ်း၊ အဖြူ / အနက်အရွယ်အစား - ၁၇.၅ * ၉.၅ စင်တီမီတာ BFE - အထက် ၉၉% အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - တစ်နေ့လျှင်အိတ် / အိတ် ၁၀၀၀၀၀ စီအီးထုပ်ပိုးမှုမူလရင်းမြစ် - တရုတ် MOQ: ၁၀၀၀၀၀ အပိုင်းအစလျှောက်လွှာ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစောင့်ရှောက်မှုထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း - ၁။ နမူနာများအတွက် FedEx / DHL / UPS / TNT၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ၂။ လေယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ ...
Elastic Ear Loop ပါသောမျက်နှာဖုံး
အသုံးပြုခြင်း ၁။ လျှောက်လွှာ။ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ အထည်အလိပ်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ SPAs၊ ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များစသဖြင့် ၃။ အသုံးပြုခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်: 1. Welcom OEM & ODM ။ 2. စက်ရုံစျေးနှုန်းအလယ်အလတ်ကွာခြားချက်မရှိပါ။ ၃။ အရည်အသွေးကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ စတိုင်၊ ပုံစံ၊ ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ၆ ။ ၇ ။ ၈။ "Quick Response" နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု။ အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း - ၁။ နမူနာအတွက် FedEx / DHL / UPS / TNT၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ၂။ လေယာဉ်ဖြင့်သို့မဟုတ်လေယာဉ်အားဖြင့် ...